1 Ahene 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahene Nhoma a Edi Kan 2:1-46
Dawid maa Solomon akwankyerɛ (1-9)
Dawid wui; Solomon bedii hene (10-12)
Adoniya pɔw bɔne no de no kɔɔ owu mu (13-25)
Ɔpam Abiatar; okum Yoab (26-35)
Okum Simei (36-46)
2 Bere a Dawid rebewu no, nsɛm a ɔka kyerɛɛ ne ba Solomon ni: 2 “Merebewu,* enti ma wo ho nyɛ den+ na yɛ w’ade sɛ ɔbarima.+ 3 Yɛ eyi fa di w’asɛde so wɔ Yehowa wo Nyankopɔn anim: Nantew n’akwan so na di n’ahyɛde, ne mmara nsɛm, n’atemmusɛm, ne ne nkaesɛm so sɛnea wɔakyerɛw wɔ Mose Mmara no mu no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara a wobɛyɛ ne baabiara a wobɛkɔ no, ebesi wo yiye.* 4 Ɛno bɛma Yehowa adi ne bɔhyɛ so. Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Sɛ wo mma hwɛ wɔn akwan yiye na wɔde wɔn koma nyinaa ne wɔn kra* nyinaa som me nokware mu+ a, ɛnde daa w’aseni na ɔbɛtena Israel ahengua so.’+ 5 “Seruia ba Yoab nso, wo ara wunim nea ɔde yɛɛ me; wunim nea ɔde yɛɛ Israel asahene baanu, Ner ba Abner+ ne Yeter ba Amasa.+ Okum wɔn, na ɔkaa mogya gui+ asomdwoe bere mu te sɛ ɔko bere. Ɔde ɔko mogya kekaa n’abɔso ne ne nan ase mpaboa mu. 6 Fa wo nyansa yɛ adwuma, na mma ɔmmfa ne ti so dwen nnkɔ Ɔdamoa* mu asomdwoe mu.+ 7 “Gileadni Basilai+ mma no de, da ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ wɔn, na ma wonnidi wo pon so bi, efisɛ bere a miguan fii wo nua Absalom anim+ no, wɔbɛtaa m’akyi.+ 8 “Benyaminni Gera ba Simei a ofi Bahurim no te wo nkyɛn ha yi ara. Da a merekɔ Mahanaim+ no, ɔdomee me yayaayaw,+ nanso bere a obehyiaa me wɔ Yordan ho no, mekaa no ntam wɔ Yehowa din mu sɛ, ‘Merentwe sekan nkum wo.’+ 9 Mma ɔmmfa ne ho nnni.+ Woyɛ ɔbarima nyansafo, na wunim nea ɛsɛ sɛ wode yɛ no; mogya mu na ma ɔmfa ne ti so dwen nsian nkɔ Ɔdamoa* mu.”+ 10 Ɛnna Dawid ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no wɔ Dawid Kurow+ mu. 11 Mfe* dodow a Dawid de dii Israel so hene no si mfe 40. Ɔtenaa Hebron+ dii ade mfe 7, na ɔtenaa Yerusalem nso dii ade mfe 33.+ 12 Ɛnna Solomon tenaa ne papa Dawid ahengua so, na nkakrankakra, n’ahenni no timii.+ 13 Akyiri yi, Hagit ba Adoniya baa Solomon maame Bat-Seba nkyɛn. Ɛnna maame no bisaa no sɛ: “Wobaa no asomdwoe mu anaa?” Na obuae sɛ: “Mebaa no asomdwoe mu.” 14 Afei ɔtoaa so sɛ: “Mede asɛm bi rebɛto w’anim.” Ɛnna maame no kae sɛ: “Kasa.” 15 Ɔno nso kae sɛ: “Wo ara wunim sɛ me na anka ɛsɛ sɛ midi ade, na me na na Israel nyinaa ani da so sɛ mɛyɛ ɔhene;+ nanso ahenni no fii me nsa kodii me nua no nsam, na Yehowa na ɔma ekodii ne nsam.+ 16 Seesei abisade baako pɛ na mede reto w’anim. Mmɔ m’asɛm no ngu.” Ɛnna maame no ka kyerɛɛ no sɛ: “Kasa.” 17 Afei ɔkae sɛ: “Mesrɛ wo, kɔka kyerɛ Ɔhene Solomon sɛ ɔmfa Sunemni Abisag+ mma me aware. Minim sɛ ɔremmɔ w’asɛm ngu.” 18 Ɛnna Bat-Seba kae sɛ: “Asɛmpa! Mɛkɔ na me ne ɔhene akɔkasa ama wo.” 19 Enti Bat-Seba kɔɔ Ɔhene Solomon nkyɛn sɛ ɔde Adoniya asɛm no rekɔto n’anim. Ntɛm ara na ɔhene sɔre kohyiaa no, na ɔhene bɔɔ ne mu ase maa no. Afei ɔkɔtenaa n’ahengua so, na ɔhene maa wɔde akongua besii hɔ maa ne maame, na ɔtenaa ne nifa so. 20 Ɛnna ne maame kae sɛ: “Abisade ketewa bi na mede rebɛto w’anim. Mmɔ m’asɛm no ngu.” Enti ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Me maame, kasa na meremmɔ w’asɛm ngu.” 21 Maame no kae sɛ: “Fa Sunemni Abisag ma wo nua Adoniya na ɔnware no.” 22 Ɛnna Ɔhene Solomon ka kyerɛɛ ne maame sɛ: “Adɛn nti na worebisa Sunemni Abisag ama Adoniya? Ɛnde bisa ahenni no ka ho ma no ɛ,+ efisɛ ɔyɛ me nua panyin,+ na ɔsɔfo Abiatar ne Seruia+ ba Yoab+ nso taa n’akyi.” 23 Ɛnna Ɔhene Solomon kaa Yehowa ntam sɛ: “Ade a Adoniya abisa yi, sɛ mamma wamfa ne nkwa* antwa so a, ɛnde Onyankopɔn ntua me ka na ɔnsan mfa bi nka ho. 24 Na sɛ́ Yehowa a wama m’ase atim+ na ɔde me atena me papa Dawid ahengua so, na wama manya ofi*+ sɛnea ɔhyɛɛ bɔ no te ase yi, ɛnnɛ Adoniya bewu.”+ 25 Ɛhɔ ara na Ɔhene Solomon somaa Yehoiada ba Benaia+ ma ɔkɔtow hyɛɛ Adoniya so kum no. 26 Ɔhene ka kyerɛɛ ɔsɔfo Abiatar+ sɛ: “Kɔ w’asaase so wɔ Anatot!+ Wofata owu, nanso ɛnnɛ merenkum wo, efisɛ wosoaa Awurade Tumfo Yehowa Adaka no wɔ me papa Dawid anim,+ na me papa amanehunu nyinaa mu no, wuhuu amane bi.”+ 27 Enti Solomon pam Abiatar na wanyɛ Yehowa sɔfo bio; ɛno maa Yehowa asɛm a ɔka tiaa Eli fi wɔ Silo+ no baa mu.+ 28 Bere a Yoab tee asɛm no, oguan kɔɔ Yehowa ntamadan+ no adiwo kosoo afɔremuka no mmɛn mu denneennen, efisɛ ɛwom sɛ Yoab ankɔ Absalom afã+ de, nanso okodii Adoniya akyi.+ 29 Ɛnna wɔbɛka kyerɛɛ Ɔhene Solomon sɛ: “Yoab aguan kɔ Yehowa ntamadan no adiwo, na ɔwɔ afɔremuka no ho.” Enti Solomon somaa Yehoiada ba Benaia, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ, kɔtow hyɛ no so kum no!” 30 Ɛnna Benaia kɔɔ Yehowa ntamadan no adiwo hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea ɔhene aka ni, ‘Fi adi’” Nanso obuae sɛ: “Daabi! Ɛha ara na mewu ada.” Ɛnna Benaia bɛbɔɔ ɔhene amanneɛ sɛ: “Nea Yoab aka ni, na mmuae a ɔde maa me ni.” 31 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea ɔkae no, yɛ no saa ara; tow hyɛ no so kum no, na munsie no na munyi mogya a edi bem a Yoab hwie gui no mfi me so ne me papa fi so.+ 32 N’ankasa mogya na Yehowa de begu ne ti so, efisɛ ɔfaa me papa Dawid akyi de sekan kum mmarima baanu a wɔteɛ na woye sen no; okum Israel sahene+ Abner+ a ɔyɛ Ner ba no, ne Yuda sahene+ Amasa+ a ɔyɛ Yeter ba no. 33 Wɔn mogya bɛba Yoab ne n’asefo* ti so akosi daa;+ Dawid ne n’asefo* ne ne fi ne n’ahengua de, Yehowa bɛma wɔanya asomdwoe daa.” 34 Ɛnna Yehoiada ba Benaia foro kɔe, na ɔkɔtow hyɛɛ no so kum no, na wosiee no wɔ ne fi nkyɛn wɔ sare so. 35 Afei ɔhene de Yehoiada ba Benaia+ sii n’ananmu wɔ asraafo no so, na ɔsɔfo Sadok+ nso, ɔhene de no sii Abiatar ananmu. 36 Ɛnna ɔhene soma kɔfrɛɛ Simei+ bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Si ofi wɔ Yerusalem na tena ha. Mfi ha nkɔ baabiara. 37 Da a wubepue akotwa Kidron Bon+ no, owu na wubewu. Wo mogya bɛba abegu w’ankasa wo ti so.” 38 Ɛnna Simei ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wonkaa bɔne. Sɛnea me wura ɔhene aka no, saa ara na w’akoa bɛyɛ.” Enti Simei tenaa Yerusalem kyɛe. 39 Nanso mfe abiɛsa akyi no, Simei nkoa baanu guan kɔɔ Maaka ba Akis+ a ɔyɛ Gat hene no nkyɛn. Ɛnna nkurɔfo bɛka kyerɛɛ Simei sɛ: “Hwɛ, wo nkoa no wɔ Gat.” 40 Ntɛm ara na Simei sɔre hyehyɛɛ n’afurum, na ɔkɔɔ Akis nkyɛn wɔ Gat kohuu ne nkoa no, na Simei de ne nkoa no fi Gat bae. 41 Ɛnna wɔkɔka kyerɛɛ Solomon sɛ: “Simei afi Yerusalem akɔ Gat aba.” 42 Ɛhɔ ara na ɔhene soma kɔfrɛɛ Simei, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mamma woanka Yehowa ntam, na mammɔ wo kɔkɔ sɛ, ‘Ɛda a wubefi ha akɔ baabi foforo biara no, owu na wubewu’? Na wo nso woanka ankyerɛ me sɛ, ‘Asɛm a woaka yi de, wonkaa bɔne; medi so’?+ 43 Adɛn nti na woanni Yehowa ntam ne mmara a mehyɛɛ wo no so?” 44 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ: “Adebɔne a woyɛɛ me papa Dawid no nyinaa, wo ara wunim wɔ wo koma mu,+ na Yehowa bɛdan wo bɔne no agu w’ankasa wo ti so.+ 45 Nanso Ɔhene Solomon de, wobehyira no,+ na Dawid ahengua nso betim wɔ Yehowa anim daa.” 46 Ɛnna ɔhene de ahyɛde maa Yehoiada ba Benaia ma ɔkɔtow hyɛɛ no so kum no.+ Na ahenni no timii wɔ Solomon nsam.+
^ Anaa “wobɛyɛ w’ade nyansa mu.”
1 Ahene 2